Umenzi omtsha wobuchwephesha ogqwesileyo kwimveliso ye Iimveliso zokukhanya kwe-LED.
Kubandakanywa ukukhanya koMkhukula we-LED, ukukhanya komsebenzi we-LED kunye ne-Highbay ye-LED, njl.
I-Hengjian igxile kuphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso nolawulo olusekwe ebantwini njengesiseko. Sidlule i-ISO9001 kunye ne-BSCI. Ubudlelwane bokusebenzisana buye basekwa ngeempawu ezininzi, njenge-CREE, Bridgelux kunye ne-Meanwell njl.
Iimveliso zethu ziqinisekiswe yi-CE, GS, SAA, ETL, ERP kunye neROHS certification. Okwangoku, siye safumana amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-258 kwiimodeli eziluncedo kunye nama-patent abonakalayo angama-125 e-EU.
Amalungelo obunikazi kwiimodeli zokuSebenzisa
I-Hengjian igxile kuphando lwetekhnoloji kunye nophuhliso nolawulo olusekwe ebantwini njengesiseko.
Sidlule i-ISO9001 kunye ne-BSCI. Ubudlelwane bokusebenzisana buye basekwa kunye neebranti ezininzi, ezinje nge-CREE, Bridgelux kunye ne-Meanwell njl.njl. Okwangoku, siye safumana amalungelo awodwa omenzi wechiza angama-258 kwiimodeli eziluncedo kunye nama-patent abonakalayo angama-125 e-EU.
I-Hengjian iye yanikezelwa njengezihloko ezihloniphekileyo ezifana ne-National High-tech Enterprises, i-Integrity Enterprise, i-Ningbo Engineering Technology Centre, i-Ningbo ye-patent ye-patent yeshishini, i-Cixi Growth Potential Enterprise kunye neCandelo elithembekileyo.
Siphinde sonyulwa kuluhlu olucetyiswayo lweMveliso ka-Ningbo ngokuzimeleyo kunye neMveliso eziPhakamileyo zoNyaka ka-2015, iLungu leBhunga le-Ningbo Lighting Association of Industry Appliance Association, ilungu le-Ningbo Electronic Industries Association kunye nelungu le-Ningbo Semiconductor Lighting Technical Innovation Strategic Alliances Indibaniselwano yezoRhwebo-yeYunivesithi-yoPhando.
Kukho abasebenzi abangaphezu kwe-150, phakathi kwabo abangaphezu kwama-50 abasebenzi abanezidanga zekholeji okanye ngaphezulu. Nentanda-bulumko yokusebenza yokunyaniseka, ukuzinikela, ubunyani kunye nokuyila, sizabalazela ukwakha inkcubeko yeshishini ngeempawu zeHengjian. Ukujolisa kulonwabo kwaye sijolise kuhlumo, ubutyebi nolonwabo, siqhubeka sisenza umzamo kwinto entsha. Ngeminyaka emithandathu yokusebenza kunye nophuhliso, impumelelo yethu ebalaseleyo iye yamkelwa ngawo onke amacandelo oluntu.
Kwisigaba esitsha sophuhliso esinamathuba kunye nemiceli mngeni, sizabalazela ukubonelela abathengi ngeemveliso ezisemgangathweni ophezulu. Ngombono kunye namandla apheleleyo, singathanda ukwenza inkqubela phambili kunye nabathengi bethu ekwenzeni ikamva eliqaqambileyo. I-Hengjian Photoelectron ikhanyisa umhlaba.